I-Twilert: Izexwayiso zamahhala ze-imeyili ezivela ku-Twitter | Martech Zone
ULwesine, April 4, 2013 ULwesine, April 4, 2013 Douglas Karr
Besilokhu sigxile kokuncane Twitter kuleli viki, ngakho-ke nanti elinye ithuluzi elilula elingakusiza ukusebenzisa i-Twitter ukuthola ibhizinisi elisha.
I-Twilert ithumele cishe izexwayiso eziyizigidi ezingama-40 kubasebenzisi bayo. Uhlelo lokusebenza lwewebhu olukuvumela ukuthi uthole izibuyekezo ezijwayelekile ze-imeyili zama-tweets aqukethe igama lakho, umkhiqizo wakho, umkhiqizo wakho, insizakalo yakho… noma elinye igama elingukhiye elifanele ocabanga ukuthi lingasiza ekuholeni inkampani yakho ebhizinisini elisha ku-Twitter.
Ngingancoma ukusebenzisa isihlungi sokucinga esithuthukile - kunezinketho ezinhle ngolimi, indawo kanye nesimo sengqondo - njengokuthi ngabe bekukhona "?" ku-tweet. Lokhu kulungile ukuthola abantu abadinga usizo futhi baphendule ngqo kubo!
Tags: umbuzo twitterthwilisaukutholwa kwe-twitterizexwayiso ze-twitter
I-Qvidian: Iyini i-Playbook Yokuthengisa?
Elesibili 2 Lutho
Ngo-Apr 4, i-2013 ku-11: 02 AM
Ngiyabonga uDoug. lezi izindaba ezinhle. Ungaba nama-akhawunti amaningi aya ku-imeyili efanayo?
UJun 19, 2013 ngo-11: 39 AM
I-TWILERT ngokudabukisayo ayisekho mahhala